Ngabe i-geoengineering iyindlela yokubalekela ukumelana nokushintsha kwesimo sezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunamaphrojekthi we-geoengineering ahlose ukuthonya ukuguquka kwesimo sezulu. Lawa ngamaphrojekthi azama ukunciphisa noma ukunxephezela izinkinga umhlaba wethu onazo ngemiphumela ehlukile yokuguquka kwesimo sezulu.
Kodwa-ke, izenzo ezenziwa yi-geoengineering ziphakamisa imibuzo yokuziphatha okuhle, ngoba inezingozi ezahlukahlukene emhlabeni. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini eyenziwayo ukunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu?
1 Ukwenziwa kwe-geeoengineering
2 Izinqubo zemvelo ezilinganayo
Abaphenyi abavela kuwo wonke umhlaba bebelokhu bezama amashumi eminyaka ngalolu hlobo lwephrojekthi efuna ukulungisa izimo ezahlukahlukene zesimo sezulu ngokuthanda ukudala noma ukuvimbela imvula ezindaweni ezithile, ukuphatha amazinga emisebe yelanga noma ukunciphisa i-carbon dioxide emoyeni.
Isibonelo, i-solar geoengineering isebenza ngayo phatha inani lokukhanya kwelanga okungena emkhathini, ukuze ulawule ukufudumala komhlaba futhi wehlise ukufudumala kwembulunga yonke. Kumamodeli wokuhlola isenzo se-geoengineering singaguqula imiphumela yokushintsha kwesimo sezulu, noma kungaziwa ukuthi empeleni kungaba nomthelela yini.
Isimo sezulu seplanethi sizoshintsha yebo noma yebo, kodwa-ke, kungenzeka ukuzama ukunciphisa imithelela yalolu shintsho lwesimo sezulu. Lobu buchwepheshe bungazuzisa abantu abaningi futhi banciphise ukulimaza abanye, kepha futhi nokuhlukile.
Noma kunjalo, geoengineering asinciphisi isidingo sokwakha uhlelo lwamandla ahlanzekile futhi siholele umnotho ekuguqukeni kwamandla okususelwa emandleni ahlanzekile avuselelekayo.
Amanye amaphrojekthi walolu hlobo ayatholakala emakethe, njengoba kufakazelwa ukuthi ngoMashi 2012 uMphakathi waseMadrid wabela cishe ama-euro ayizigidi eziyi-120.000 kuphrojekthi yokwandisa imvula yeqhwa ngobuchwepheshe "bokulawulwa kwamafu" inkampani yaseJalimane iRadimeter Physics.
Izinqubo zemvelo ezilinganayo
Enye iphrojekthi ye-geoengineering ukudala izihlahla zokwenziwa ezikwazi ukwenza lokhu bamba futhi ugcine i-CO2 njengeyona nto yangempela, kepha ngejubane elikhulu nokusebenza kahle. Kukhona nemiklamo ethula ama-microcrystals emkhathini ukuze imisebe yelanga ibuyele emuva ekulahlweni kwensimbi olwandle ukukhuthaza ukukhula kwezitshalo ezincane kakhulu ezimunca i-CO2 bese ziyidonsela phansi olwandle.
Ngalobu buchwepheshe sidlala njengoNkulunkulu futhi kufanele sibushiye manje njengoba sesisesikhathini, ngoba imvelo inemijikelezo yayo ngaso sonke isikhathi futhi asazi ukuthi lokhu kungaba namiphi imiphumela esimweni sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ngabe i-geoengineering iyindlela yokubalekela ukumelana nokushintsha kwesimo sezulu?
Izisho mayelana nesikhathi